देव: विकास बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण : | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर देव: विकास बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण :
on: २४ श्रावण २०७५, बिहीबार ११:२१ मुख्य खबर, लगानी
देव: विकास बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण :
बैङ्कले आव ०७४/७५को चौथो त्रैमाससम्ममा रू. २७ करोड ५३ लाख नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा ४ दशमलव ८७ प्रतिशतले कमी हो । बैङ्कले अघिल्लो आवमा रू. २८ करोड ९४ लाख नाफा कमाएको थियो । चौंथो त्रैमाससम्ममा बैङ्कको चुक्तापूँजी ७५ प्रतिशतले बढेर रू. २ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ४८ करोड १२ लाख छुट्याएको छ । बैङ्कको लगानी रू. ७४ करोड ४९ लाख रहेको छ । लगानी अघिल्लो आवको तुलनामा १ सय ३६ प्रतिशतले बढी हो । बैङ्कले सहारा विकास बैङ्क र वेष्र्टन डेभलपमेण्ट बैङ्कलाई प्राप्ती गर्नको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि राष्ट्रबैङ्कमा पत्र पठाएको छ । यी दुई बैङ्कलाई प्राप्ती पश्चात बैङ्कको सेवा देशको मध्य तराई र मध्य पश्चिममा थप विस्तार हुनेछ । साथै, बैङ्कले जारी गरेको १० बराबर ४ अनुपातमा हकप्रद शेयर शेयरधनीको डिम्याट खातामा जम्मा भएको छ । २०७४ फागुन १६ गतेसम्म अभौतिकीकरण गराएका शेयरधनीको खातामा जम्मा भएको हो । त्यसपछि आभौतिकीकरण गराएका शेयरधनीको हकमा पनि सम्बन्धित शेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म पनि शेयर अभौतिकीकरण नगरेका शेयरधनीले एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडमा आफ्नो शेयर अभौतिकीकरण गराउन अनुरोध गरेको छ ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. १२७
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ४५८
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू.१२४
१८० दिनको भारित औषत व्यापार मूल्यः रू.१४४.१४
कम्पनीका महत्वपूर्ण अनुपात:
अध्यक्षः डा.सुवर्ण लाल बज्रचार्य
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः विजय बहादुर श्रेष्ठ
प्रधान कार्यालयः लाल दरवार, काठमाडौं
स्टक स्टिकरः डिविविएल
बैङ्कका महत्वपूर्ण वित्तीय परिसूचकहरु (रू. हजारमा )
बैङ्कको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दाः
असार मसान्तसम्ममा बैङ्कले रू. १५ अर्ब ६९ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने रू. १३ अर्ब ६९ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा निक्षेप ५० प्रतिशत र कर्जा ४२ प्रतिशतले बढी हो ।
बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी रू. ६९ करोड ३४ लाख, कर्मचारी खर्च रू. १३ करोड ९० लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू.१७ करोड ५४ लाख र सञ्चालन नाफा रू. ४६ करोड १० लाख रहेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा खुद ब्याज आम्दानी २४ दशमलव ९९ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
बैङ्कको स्थिर सम्पत्ति रू. २३ करोड १० लाख र अन्य सम्पत्ति रू. ४७ करोड ५९ लाख रहेको छ । बैङ्कले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ४ करोड ४७ लाख छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । पूँजीकोष पर्याप्पतता १८ दशमलव ९० प्रतिशत र पूँजी कोष लागत ९ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ ।
बैङ्कको गत आवको चौथोे त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार बैङ्कको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक रू. १० दशमलव ८७, मूल्य आम्दानी अनुपात ११ दशमलव ८७ गुणा, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. ७ सय ७७ दशमलव ९७, तरलता अनुपात ३१ दशमलव ८४ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय १८ दशमलव ९९ रहेको छ । बुधवारको शेयर मूल्य रू. १ सय २७ रहेको छ ।
डिभिडेण्ड इल्ड रेसियोः
प्रतिशेयर लाभांश (गत वर्ष)/प्रति शेयर बजार मूल्य ×१००
अर्निङ पावर रेसियोः
खरीद चापः बैङ्कको बुधवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद २ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म १० हजार ८ सय २५ कित्ता शेयर खरीद र ४ हजार ९ सय ५० कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
९ मे २०१८ ८ अगष्ट २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः बैङ्कको ६४ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा कालो मारोबोजु आकृती बनेको छ । यस्तो आकृतीले बैङ्कको शेयर मूल्य घट्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआईः बैङ्कको ६४ दिनको कारोबारमा आरएसआइ न्यूट्रल जोन (४३ दशमलव ७९ स्केल) मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः बैङ्कको ६४ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन शून्य दशमलव ८० विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखिम र कम प्रतिफल प्राप्त हुने गर्दछ ।
मुभिङ एभरेजः बैङ्कको ६४ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य यी दुई रेखाभन्दा तल रहेको छ । बुधवारको शेयर मूल्य रू. १ सय २७ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य मङ्हगिएमा रू. १ सय २९ मा प्रतिरोध र मूल्य सस्तिएमा रू. १ सय २५ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
देवः विकासको बोनस सूचिकृत
४ आश्विन २०७५, बिहीबार १६:१३
देव: विकास बैङ्कको सञ्चालक समितिको हेरफेर
२४ श्रावण २०७५, बिहीबार १२:५८
देवः विकास बैङ्क : मैनबत्ती विश्लेषण (आइतवार, २८ माघ २०७४)
२८ माघ २०७४, आईतवार ०९:२७
देवः विकास बैङ्क : मैनबत्ती विश्लेषण (आइतवार, १७ मङ्सिर २०७४)
१७ मंसिर २०७४, आईतवार १३:१०